Waajibaadka Iyo Axkaamta Uu Leeyahay Bisha Barakeysan Ee Ramadan Iyo Fadligiisa Qaybta 2aad Wargane News - Wargane News
Home Somali News Waajibaadka Iyo Axkaamta Uu Leeyahay Bisha Barakeysan Ee Ramadan Iyo Fadligiisa Qaybta...
Waxaa waajib ku ah qofka sooman inuu ka tago xanta iyo beenta, xantana waxaa la yiraahdaa in aad qof walaalkaa ah ama walaashaa ah aad ka sheegto wax uu dhibsanayo haba ahaato
tilmaantaa. Namiimnimada oo ah warka loo kala qaado dadka dhexdiisa oo dabadeedna ay dadkii is dhexmaraan ama ay dhalato fidno iyo fasaad
Lacnada (oo habaarida ah)
Cayda waa inuu iska ilaaliyo oo aanu afkiisa ka oran eray xun noocuu doono ha noqdee isla markaana uusa dhageysan, indhihiisa waa inuusa xaaraan ku fiirin, carrabkiisana uu ka dhowro inuu ku hadlo wax xaaraan ah, sida beenta ama hadal been ah oo la abuurto. Rasuulkii Allena isgoo ka hadlaya arrimahan soo sheegnay wuxuu yiri. (“Qofkii aan iska dayneyn, beenta iyo ku dhaqankeeda Ilaahay dan kama laha inuu qofkaasi ka tago cuntadiisa iyo cabbiddiisa”).
Cunto iyo cabid kas ah, Alle waa naxariiste ka ugu wanaagsan sidaa daraadeedna qofka hadduu hilmaamo isgoo sooman inuu wax cabo ama cuno Alle wuu u ogolaaday soonkiisa inuu jira
Galmada yacni adiggoo afadaada jaamacdo maalinnimo nooc kasta ha ahaatee, sidoo kale waa la mid ah manida (shahwada) qofka sooman soo jeed kaga timaado. Laakiinse waxba kuma jabna inuu nin la fadhiisto afadiisa, dhunkado waayo tani aalaaba ma keento shahwo laakiinse haddii uusan qofku hanan karin naftiisa inuu ka dheeraado (afadiisa) inta maalinnimada ah.
Irbadaha iyo faleebooyinka nafaqa sideyaasha ah.
haweenka haddii uu ka yimaado dhiig caado ama mid dhalmo 5. Ismatajin kas ah, haddiise aan la iska keenin soonku kuma burayo
ka bixidda diinta Islaamka (riddoobid), Allaa ka magan galne’e